स्टार होटलमा सय दिन मस्ती, २६ लाख बिल देखेपछि गा य ब ! – Jagaran Nepal
स्टार होटलमा सय दिन मस्ती, २६ लाख बिल देखेपछि गा य ब !
एजेन्सी– यो दुनियाँमा मानिसहरु पनि बढो विचित्रका हुन्छन् । समाचारको हेडिङ पढेर तपाईंले यो अनुमान लगाउनु भयो होला यो के विषयको समाचार हो भन्ने ।हो, भारतको हैदराबादको एक स्टार होटलमा एक व्यक्तिले सय दिनसम्म बसेर मस्ती गरे । तर, अन्तिममा जब उनको बिल १२ लाख ३४ हजार भारतीय रुपैयाँ आयो, उनी बिल नतिरी होटलबाट गायब भए ।
प्रहरीले यो घ ट ना ताज बंजारा नामको होटलमा भएको र त्यहाँको व्यवस्थापनले उ जु री दिइसकेको बताएको छ । यस्तो गर्ने व्यक्ति व्यापारी शंकर नारायण भएको प्रहरीले जनाएको छ ।होटलको व्यवस्थापनले भनेअनुसार यी व्यक्ति १०२ दिन होटलको लक्जरी सुइट कोठामा बसेका थिए । उनको कूल बिल चाहिँ २६ लाख रुपैया उठेको थियो । उनले १३ लाख चाहिँ होटललाई बुझाएछन् । र, त्यसपछि त्यहाँबाट फरार भएछन् ।
उनी बारम्बार सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा पनि नआएपछि प्रहरीलाई उजुरी दिइयो । प्रहरीलाई चाहिँ ती व्यक्तिले आफूले पूरै रकम उपलब्ध गराएको बताएका छन् । यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
एजेन्सी निकै घा त क र पछिल्लो समय विश्वमा त्रा स फैलाइरहेको कोरोना भाइरससँग जुधिरहेको चीनको वुहान सहरमा ६ दिनमा नै एक अस्पताल बनाउने काम सुरु भएको छ । ६ दिनमा यो अस्पताल किन बनाउन लागिएको भने त्यहाँ कोरोना भाइरस सं क्र मि त बिरामीको उपचार गर्न सकियोस् ।चीनमा अहिलेसम्म कम्तिमा पनि कोरोना भाइरसका ८ सय ३० बिरामी फेला परिसकेका छन् । ४१ जनाको त यो भाइरसका कारण मृ त्यु पनि भइसकेको छ ।
१ करोड १० लाखभन्दा धेरै मानिस बस्ने वुहान सहरमा यो भाइरस फैलन थालिसकेको छ ।अहिले त्यहाँका अस्पतालहरुमा निकै ठूलो भीड लाग्न थालेको छ, त्यहाँ औषधिको माग निकै बढेको छ ।र, यही बीचमा त्यहाँ नयाँ अस्पताल बन्न लागेको हो । चिनियाँ सरकारी मिडियाका अनुसार यो नयाँ अस्पतालमा १ हजार बेड बन्दै छन् । अस्पतालका लागि २५ हजार वर्गमिटर क्षेत्रमा काम सुरु भइसकेको छ ।
तर, चीनमा यस्तो गर्न लागिएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि सन् २००३ मा बेइजिङमा सार्स भाइरससँग जुध्नका लागि आनन फाननमा एउटा ठूलो अस्पताल बनाइएको थियो ।तर, यसबारे अब शंका के निस्किएका छन् भने के ६ दिनमा नै यति ठूलो अस्पताल बनाउन सकिएला त त्यसो त चीनमा यसअघि पनि विभिन्न रेकर्ड बनाइएका छन्, भवन निर्माणमा । सन् २००३ मा पनि सात दिनभित्र बेइजिङमा अस्पताल बनाइएको थियो । अब सायद त्यो रेकर्डलाई तोड्नका लागि यो काम गर्न लागिएको हो ।यो सम्भव पनि किन भएको हो भने यसलाई प्रिफ्याब्रिकेटेड सामानबाट बनाइन्छ ।
यसका लागि चीनले देशका विभिन्न ठाउँबाट इन्जिनियरहरु बोलाइसकेको छ ।शुक्रबार ग्लोबल टाइम्सले यो पुष्टि गरेको थियो कि त्यहाँ पिपुल्स लिबरेसन आर्मीका १५० भन्दा धेरै स्वास्थ्यकर्मी पुगिसकेका छन् ।सन् २००३ मा सार्स भाइरस फैलिँदा त्यहाँ बेइजिङमा एउटा अस्पताल सात
दिनमा बनाइएको थियो । यो नै एउटा अस्पताल सबैभन्दा छिटो बनेको रेकर्ड थियो ।चाइनाडटकमका अनुसार त्यो अस्पताल बनाउन ४ हजार मानिसले दिनरात काम गरेका थिए ।यो अस्पतालका प्रत्येक वार्डमा एउटा बाथरुम राखिएको थियो, अस्पतालमा एक्सरे, इमर्जेन्सी रुम सबै बनेका थिए । तर, यो अस्पताल त्यहाँ महामारी रोकिएपछि बन्द गरिएको थियो ।